VaTsvangirai Vanotaura Pamire Hurumende yeMubatanidzwa
Chivabvu 20, 2009
Mutungamiriri wehurumende, VaMorgan Richard Tsvangirai, vanoti hurumende yemubatanidzwa iripo pakuona kuti munyika mava nehutongi wejekerere, mavanga evanhu akakonzerwa nemhirizhonga, apodzwa, kugadzirisa kodzero dzavanhu pamwe nekuvandudza hupfumi hwenyika.
VaTsvangirai vataura mashoko aya neChitatu pavaita musangano nevakuru vemabhizinesi, vadzidzi, vemachechi, pamwe nevatsigiri vemapato akasiyana-siyana. Musangano uyu waitirwa paMutare Polytechnic College.
Asi vasati vasangana nevamwe vanhu, VaTsvangirai vatanga kusangana nagavhuna weManicaland, VaChristopher Mushowe, uye vatungamiriri vemapazi ehurumende vakasiyana-siyana pamahofisi emuzinda wehurumende. Hapana aziva kuti vataura chii mumusangano uyu sezvo vatori venhau vasina kupihwa mvumo yekupindamo, uye kubvunza nezvazvo.
VaTsvangirai vati chinangwa chavo chekuenda kwaMutare ndechekuzivisa vanhu maererano nepava nehurumende yemubatanidzwa.
VaTsvangirai vati nyika inofanirwa kukosha hutongi hwejekerere, uye kuchengetedza kwekodzero dzevanhu pamwe nekugadzirisa hupfumi. Vatiwo vari kuudza vanhu maererano nepavava sezvo ruzhinji rwenyika rwava kusagadzikana nekumira kwakaita zvinhu.
Vati vanhu vazhinji vari kunonokerwa nekufamba kuri kuita zvinhu muhurumende yemubatanidzwa. Vati hurumende yavo iri kukumbira nguva yakati kuti, kuitira kuti zvinhu zvifambe nemazvo sekutarisirwa kuri kuitwa neruzhinji.
Vati hurumende yavo yakatarisana nedambudziko rekushaya mari, izvo zviri kupa kuti vatarisire kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika. Vati kuti izvi zvikwanisike, vakuru vemunyika ino vanofanirwa kuonekwa vachishandura mafungiro avo pakuita kwavo uye nekutaura kwavo.
VaTsvangirai varamba kutaura nezvenyaya yekuti vave papi panyaya yezvinetswa muhurumende zvakaita senyaya yemagavhuna ematunhu, gavhuna webhanga guru renyika, muchuchisi mukuru, vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika, vanyori vemapazi ehurumende, uye yekutoreswa mhiko kwaVaRoy Bennet semutevedzeri wegurukota rezvekurima. Vati nyaya iyi haitaurwi paruzhinji sezvo kuita uku kunenge kuri kuvhiya chidembo paruzhinji rwevanhu.
VaTsvangirai vatiwo hurumende iri kuda kugadzirisa mashandiro emapazi ehurumende. Vati pahurongwa uhu zvinangwa zviri pamusoro-soro zvinosanganisira bazi redzidzo, hutano, uye kuti mapazi ezvekuchengetedzwa kwenyika asiye tsika yekutsigira mapato ezvematongerwo enyika, asi kuti atsigire hurumende iripo.
Vachitaura mumashoko avo ekuvhara musangano uyu, VaMushowe vati dunhu reManicaland rakakomborerwa zvikuru sezvo riine zviwanikwa zvakawanda zvinogona kushandiswa mukuvandudza hupfumi hwenyika.
VaTsvangirai vaperekedzwa nemakurukota maviri, gurukota rezvemukati menyika, VaGiles Mutsekwa, pamwe negurukota rinoshanda riri mumahofisi mavo, VaGorden Moyo.